Ukuguqulwa kwedijithali kuyinkinga yobuholi, hhayi inkinga yezobuchwepheshe | Martech Zone
Sekuyiminyaka engaphezu kweyishumi, ukugxila ekubonisaneni kwami ​​embonini yethu kusize amabhizinisi ukuba adabule futhi aguqule izinkampani zawo ngokwamanani. Yize lokhu kuvame ukucatshangwa njengohlobo oluthile lokuphusha phezulu kusuka kubatshalizimali, ibhodi, noma iSikhulu Esiphezulu, ungamangala ukuthola ukuthi ubuholi benkampani abunalo ulwazi nekhono lokucindezela uguquko lwedijithali. Ngivame ukuqashwa ubuholi ukusiza inkampani iguqulwe ngokwamadijithi - futhi kwenzeka nje ukuqala ngamathuba okuthengisa nawokumaketha ngoba kulapho imiphumela engakholeki itholakala khona ngokushesha.
Njengoba ukwehla kweziteshi zendabuko kuqhubeka futhi nenqwaba yamasu asetshenzisiwe edijithali asetshenzisiwe, izinkampani zivame ukulwela ukwenza lolu shintsho. Izingqondo zefa kanye nezinhlelo zefa zikhona, ngezibalo nokuqondiswa kushoda. Ngokusebenzisa inqubo ye-agile, ngiyakwazi ukwethula abaholi nge-digital yabo ukuvuthwa kwezentengiso ngaphakathi kwemboni yabo, phakathi kwabancintisana nabo, futhi maqondana namakhasimende abo. Lobo bufakazi bunikeza ukucaca ukuthi sidinga ukuguqula ibhizinisi. Uma sesingenile, siphuma nohambo lokuguqula ibhizinisi labo.
Ngimangele njalo ukuthi abasebenzi bakulungele ukufunda nokukhokhisa… kepha imvamisa abaphathi nobuholi okuqhubeka kushaya amakhefu. Noma bebona ukuthi enye indlela yokuguqulwa kwedijithali futhi ukufaneleka ukuqothulwa, bahlehlela emuva ngokwesaba ushintsho.
Ukuxhumana okungekuhle phezulu kanye nokuntuleka kobuholi bezinguquko kuyizinkinga ezinkulu ezivimbela inqubekela phambili ekuguqukeni.
Ngokusho the isifundo sakamuva esivela kuNintex, Ukuguqulwa kwedijithali akuyona inkinga yezobuchwepheshe njengoba kuyinkinga yamathalente. Kungakho ababonisi abanjengami bedingeka kakhulu manje. Ngenkathi izinkampani zinethalente elihle ngaphakathi, lelo talente alivamisile ukuvezwa ngezindlela ezintsha, amapulatifomu, abezindaba kanye nendlela yokwenza izinto. Izinqubo ezi-static zivame ukuhlala nezendlalelo zabaphathi eziqinisekisa ukusimama kwayo… okungenzeka ukuthi kuvimbela lokho okudingeka ngempela.
kuphela U-47% womugqa wabasebenzi bebhizinisi bazi nokuthi luyini ushintsho lwedijithali - ingasaphathwa eyenkampani yabo
inecebo lokukhuluma / lokufeza uguquko lwedijithali.
67% yabaphathi yazi ukuthi yikuphi ukuguqulwa kwedijithali okuqhathaniswa ne-27% kuphela yabangewona abaphathi.
Naphezu kwalokho Ama-89% wabathathi bezinqumo bethi banomholi oqokiwe wezinguquko, akekho noyedwa umuntu ovela njengomholi ocacile kuzo zonke izinkampani.
Okuhlukile ngaphandle kwegebe lokuqwashisa ngumugqa we-IT wabasebenzi bebhizinisi, Ama-89% awo azi ukuthi inguquko yedijithali iyini.
Ezingxoxweni zethu nabaholi be-IT kwezethu I-Dell Luminaries podcast, siyawubona umehluko ubuholi obuqinile obenzayo ezinhlanganweni. Lezi zinhlangano azikaze zizinze ngokuzinza. Isiko lokusebenza kwalezi zinhlangano - iningi lazo izinkampani zamazwe omhlaba ezinabasebenzi abangamashumi ezinkulungwane - ukuthi ushintsho oluqhubekayo luyinsakavukela.
Ucwaningo lweNintex luyakusekela lokhu. Ngokuqondene nenhlangano yokuthengisa, isifundo siveza:
Ama-60% wezinzuzo zokuthengisa awazi nakancane ukuthi yini inguquko yedijithali
Ama-40% ochwepheshe bokuthengisa bakholelwa ukuthi ngaphezu kwengxenye yesihlanu yomsebenzi wabo kungenziwa ngemishini
Ama-74% akholelwa ukuthi isici esithile somsebenzi wabo singazenzekela.
Izinhlangano abazisebenzelayo zintula ubuholi bokuthi kungenziwa kanjani uguquko ngokusebenzisa ubuhlakani bokuzenzela nokuzenzakalela ukuvala igebe. Ngokudabukisayo, ucwaningo luye lwembula ukuthi izinzuzo zokuthengisa eziyi-17% azibandakanyi ngisho nasezingxoxweni zokuguqulwa kwedijithali namaphesenti ayi-12 anokubandakanyeka okulinganiselwe.
Ukuguqulwa kwedijithali akuyona ingozi eyengeziwe
Ukuguqulwa kwedijithali kwanamuhla akuyona ingozi ngisho nokuqhathaniswa neminyaka eyishumi edlule. Ngokuziphatha komthengi kwedijithali kuya ngokuqagela futhi nenani lamapulatifomu athengekayo akhula, izinkampani akudingeki zenze izimali ezinkulu ezinkulu ebezikade zinazo ukwenza iminyaka embalwa nje idlule.
I-Case in point yinkampani engiyisizayo ngezimpawu zedijithali. Umthengisi ungene ngesilinganiso esikhulu kakhulu obekungathatha izinyanga ukubuyisa, uma bekwazi. Kwakudinga uhlelo lobunikazi olwalunabanikazi futhi luphethwe ngumthengisi, oludinga ukubhaliswa kwepulatifomu yabo nokuthengwa kwezingxenyekazi zekhompiyutha zabo. Inkampani yangithinta yangicela usizo ngakho ngafinyelela kunethiwekhi yami.
Kunconywe nguzakwethu, ngithole isisombululo ebesisebenzisa ama-AppleTV nama-HDTV ngaphandle kweshalofu bese ngisebenzisa uhlelo lokusebenza olubiza u- $ 14 / mo ngesikrini ngasinye - Kitcast. Ngokungadingi ukwenza imali eningi kakhulu nokusebenzisa izixazululo ezingekho eshalofini, inkampani izobuyisa izindleko ngokushesha nje lapho uhlelo seluqala ukusebenza. Futhi lokho kufaka nezimali zami zokubonisana!
Ekubuyekezeni icala le- Ukuqothuka kwakamuva kukaSears, Ngicabanga ukuthi yilokho kanye okwenzekile. Wonke umuntu wangaphakathi wayeqonda ukuthi inkampani idinga ukuguqulwa, kepha babengenabo ubuholi bokuyenza yenzeke. Ukuzinza nesimo se-quo kwase kuhleliwe phakathi namashumi eminyaka futhi abaphathi abaphakathi besaba ushintsho. Lokho kwesaba nokungakwazi ukuzivumelanisa nezimo kuholele ekufeni kwabo okungenakugwemeka.
Ukuguqulwa Kwedijithali Kusatshiswa Abasebenzi Ngokungenasidingo
Isizathu sabasebenzi bebhizinisi abayitholi imemo ngemizamo yenguquko - futhi banokwesaba kwemisebenzi okungenasisekelo ngenxa yalokho - ukuthi kukhona akekho umholi ocacile ngemuva kwemizamo yezinguquko. INintex ithole ukungavumelani ngokuthi ngubani okufanele ahole imizamo yenguquko yedijithali enhlanganweni.
Njengomphumela wokungazi kwabo, ulayini wabasebenzi bebhizinisi maningi amathuba okuthi babheke imizamo yenkampani yabo yokuguqula nokuzenzakalela njenge engozini imisebenzi yabo, yize lokhu kungenjalo. Cishe ingxenye eyodwa kwezintathu zabasebenzi ikhathazekile ukuthi ukusetshenziswa kwamakhono ahlakaniphile kuzobeka engcupheni imisebenzi yabo. Noma kunjalo, iningi lemisebenzi ngeke liphele ngenxa yenqubo ehlakaniphile yokuzenzekelayo.
Ngaphakathi kweminyango yezokumaketha neyokuthengisa engisebenza nayo, izinkampani sezivele zishefule izinsizakusebenza zazo zaba zincane. Ngokutshala imali ekuguqulweni kwedijithali, ayikho ingozi yokuqedwa, kunethuba lokusebenzisa ithalenta lakho ngempumelelo enkulu. Ukukhipha ubuhlakani nobuhlakani bamaqembu akho wokuthengisa nokumaketha ekugcineni kuyinzuzo ephezulu yokuguqulwa kwedijithali!
Landa i-State of Intelligent Process Automation Study
Tags: ukuguqulwa kwedijithalithwebulaukuzenzekelayo kokuzenzekelayonintexPDFinqubo yokufunda okuzenzakalelayoumbikoukuthengisa okuzenzakalelayoukuguqulwa kokuthengisa
Ukwabelana Akukwanele - Kungani Udinga Isu Lokukhulisa Okuqukethwe